ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီအပြောင်းအလဲ – | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီအပြောင်းအလဲ –
- ko Kyaing
Posted by ko Kyaing on Aug 27, 2012 in Copy/Paste | 13 comments
ပည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ကြောင်းအားအမိန့်အမှတ် ၂၂/၂၀၁၂ ကို သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ၁။ ဦးစိုးသိန်း – သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ၂။ ဦးအောင်မင်း – သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ၃။ ဦးလှထွန်း – သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ၄။ ဦးတင်နိုင်သိန်း – သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ၅။ ဦးအောင်ကြည် – ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၆။ ဦးကျော်ဆန်း – သမ၀ါယမဝန်ကြီးဌာ ၇။ ဦးအုန်းမြင့် – မွေး/ရေ ဝန်ကြီးဌာန ၈။ ဦးအေးမြင့် – စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၉။ ဦးတင့်ဆန်း – အားကစားဝန်ကြီးဌာန ထို့အပြင့် အမိန့်အမှတ် ၂၁/၂၀၁၂ ဖြင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ ခန့်အပ်လိုက်သော ဒုတိယ၀န်ကြီးများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- ၁။ ရဲချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်း – ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၂။ ဦးပိုက်ထွေး- ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၃။ ဦးသန်းဆွေ – ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ၄။ ဦးအောင်သိမ်း – သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ၅။ ဒေါက်တာလင်းအောင် – ဘဏ္ဍာ/အခွန် ဝန်ကြီးဌာန ၆။ ဦးဆက်အောင် – စီမံ/စီးပွား ဝန်ကြီးဌာန ၇။ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်စန်းရီ – စီမံ/စီးပွား ဝန်ကြီးဌာန ၈။ ဒေါ်စုစုလှိုင် – လူမှု/၀န်ထမ်းဝန်ကြီးဌာန ၉။ ဦးသောင်းတင် – ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်း ဝန်ကြီးဌာန ၁၀။ ဦးထင်အောင် – စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၁၁။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဝင်းမြင့် – လ၀က ၁၂။ ဦးအေးမြင့်မောင် – ပတ်ဝန်းကျင်/သစ်တော ၁၃။ ဒေါက်တာဒေါ်သက်သက်ဇင် – ပတ်ဝန်းကျင်/သစ်တော ၁၄။ ဦးသောင်းထိုက် – အားကစားဝန်ကြီးဌာန ၁၅။ ဒေါက်တာဒေါ်သိန်းသိန်းဌေး – ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
eleven media မှ copy လုပ်ပါသည်
About ko Kyaing
Thomas Kyaing has written2post in this Website..
I have worked at hospitality industry.
View all posts by ko Kyaing →
ကောင်း သည် ဆိုး သည် ဘယ် လို ဖြစ် မည် သိ ကြ ပါ သ လား ခင် ဗျာ ။
အနော် ဒုတ် ထိုး နား မ ရှင်း ပါ သ ဖြင့် ရှင်း လင်း ပေး ကြ ပါ ကုန် ။
ဒေါက်တာဒေါ်ခင်စန်းရီ – အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးသောင်းတင် – ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်း ဝန်ကြီးဌာန
(ဘယ် ဦးသောင်းတင် လဲတော့ မသိ)
သူတို့ ကတော့ လူမှန် နေရာမှန် စဖြစ်ပြီ လို့ ထင်ပါတယ်။
ဆရာမ ဒေါ်ခင်စန်းရီ နဲ့ ဆရာဦးသောင်းတင် (ဖြစ်ခဲ့ရင်) တကယ်တော်ကြပါတယ်။
သူတို့ အရည်အချင်း ကို တိုင်းပြည်အတွက် အပြည့်အဝ သုံးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ :-)
သားနာမည်နဲ့ သင်္ဘောသားသင်တန်းကျောင်းတွေ ဖွင့်စား ရိုက်စားလုပ်နေတဲ့ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး မြဲနေတုန်းပါလား။
အရီးပြောသလို လူမှန်နေရာမှန် ရောက်ပါစေဗျာ။
U Thaung Tin – B.E, Electronics (RIT), M.Sc, Computer Science (Yangon)
Dr. Khin San Yee – B.Com (A.A), M.Com (Trade and Marketing), DAC, Ph.D (Germany)
မနက်ဖြန်လွှတ်တော် ကအတည်ဖြစ်ရင် ၀န်ကြီး (၆) နေရာအသစ်တွေ စာရင်းထပ်ထွက်ပါမယ်။ ဒေါ်စန္ဒာခင် ကတော့ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးနေရာ ရာထားကြောင်းပါ။
KMD ဦးသောင်းတင် ကတကယ်ဖြစသင့်တဲ့သူတယောက်ပါ။ LA ကိုတလောကလာသွားတဲ့ ဒေါက်တာသိန်းသိန်းဌေး (လက်ရှိ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ရဲ့ ဒုညွှန်ချုပ်-ပြည်သူ့ကျန်မာ) ကိုနေရာပေးထားတဲ့အတွက် Public Health လောကတန်ခိုးထွားအုံးမဲ့လက္ခဏာ ပါ။ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။
ဦးအောင်မင်း တို့အဖွဲ့ကတော့ သမ္မတနားမှာနေပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အတူလက်တွဲ ပြီး အတွင်းစည်းဝိုင်း အနေနဲ့ လုံခြုံရေး၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာတွေ စီမံခန့်ခွဲမဲ့ ပုံရှိပါတယ်။
သူက KMD ပိုင်ရှင်လို့ ကြားပါတယ်… မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်းတွေ အလာကားချပေးမယ်ဆိုပဲ…
ယဉ်ကျေးမှုဝံကျီးအသစ် ဦးကြောင်ကြီးဖြစ်ပြီး အကရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှုတ်ချုပ်ကတော့ စက်ဆီအကပညာရှင် စီတုံးလေးပါ။ သူတို့နှစ်ယောက်အခု အခန်းထဲမှာ သီးသန့် အတီးအမှုတ် လုပ်နေကြပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ လူတွေနားမရှင်း ဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ ထပ်ပြောပါမယ်.. ဦးကြောင်ကြီးက အတီးဖြစ်ပြီး စီတုံးလေးကတော့ အမှုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားရိုရိုး..ကောင်းမှကောင်း..။
အမှန်တကယ်ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးပြုအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်မယ့်သူတွေဖြစ်လာပါစေလို့ …
ကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲခြင်း၊(သို့)သမ္မတ၏ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသူတွေကို့ ချန်လပ်ခဲ့မည်ဟုသော မိန့်ခွန်းအတိုင်းစတင်နေပြီလို့သတ်မှတ်မိပါတယ်။
ဒီကနေ့မနက် Internet Journal 8-27-2012 ထဲမှာ သမ္မတရုံးအဖွဲ့အကြံပေး ဦးသောင်းတင်က မိုဘိုင်းဖုံးတွေဆိုတာအလားတောင်ပေးရမှာပါလို့ဆိုပါတယ်၊ ဆားဗစ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေက နဂိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆားဗစ်ကိုမပေးနိုင်ရင် ဒဏ်ကြေးတပရပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ အတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီး ခေတ်မှီဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးဆိသို့….ပူးပေါင်းပါဝင်လျှောက်လှမ်းကြပါဆို့….
ပြုတ်ဖို့ မရှိဘူးလားဗျာ။လူနေရာကို……….ွေးဝင်ထိုင်နေသလို ကြာလှပီ။
၀န်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့် (ဆောက်လုပ်ရေး)
၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်း (လျှပ်စစ်)
ဒုဝန်ကြီး ပြောင်း (ပြန်ကြားရေး) ဦးစိုးဝင်း (သာသနာရေး)သို့ရောက်
အင်း…သမ္မတကတော့ လဲသင့်တာတွေကို တကယ်လုပ်နေပြီလို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကတော့ ဆက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ။
ကောင်းတာတွေလုပ်ရင် ကျွန်တော်တို့ သြဘာပေးသင့်ပါတယ်။ ဆိုးတာတွေဖြစ်ရင် အပြစ်တင်ရပါမယ်။
ဘာလုပ်လုပ် မကောင်းဘူးချည်းပဲ ပြောနေကြတဲ့အသံတွေဟာ တကယ်တော့ တစ်ဖက်သတ်ဆန်လွန်းလှပါတယ်။